Musharax Cabdi Dheere oo si cad u sheegay in aanu ka qeyb galeyn doorshada Galmudug - Jowhar Somali news Leader
Home News Musharax Cabdi Dheere oo si cad u sheegay in aanu ka qeyb...
Musharax Cabdi Dheere oo si cad u sheegay in aanu ka qeyb galeyn doorshada Galmudug
Musharax Cabdi Cabdullaahi Axmed (Cabdi Dheere) oo ka mid ahaa Musharaxiintii xulafada ahaa ayaa caddeeyay in aanu ka qeyb geli doonin doorashada Madaxweynaha Galmudug, isagoo beeniyay warar been abuur ah oo suuqa la soo geliyay.
Cabdi Dheere ayaa sheegay in tabar laga dhigtay dacaayad been ah oo lagu marin habaabinayo bulshada, si loo helo kalsooni been ah.
“Waxaan aad uga xumahay in markii lagu guuldareystay in la qabto doorasho loo dhan yahay iyo wax la wada leeyahay in tabar laga dhigtay dacaayad been ah oo bulshada lagu marin habaabiyo si loo helo kalsooni been ah”ayuu yiri Cabdi Dheere.
Musharaxa ayaa beeniyay wararka sheegaya inuu iska diiwaan geliyay doorashada Madaxweynaha, isla markaana aanu diyaar u aheyn doorasho aanay u ogoleyn saamileyda siyaasadeed inuu ka qeyb galo.
“Haddaba aniga oo ah Murashax Madaxweyne Galmudug, Cabdi Cabdullaahi Axmed (Cabdi-dheere) waxaan cadeynayaa in aanan isku diiwaangelin kana qaybgelayn doorasho aan loo dhameyn oo aysan wada ogolayn dhammaan saamileyda siyaasadeed ee danaynaysa doorashada Galmugug oo ay ugu horeeyaan murashaxiinta u taagan qabashada xilalka Madaxweyne iyo ku-xigeenka”ayuu yiri
Inta badan Musharaxiinta ugu tunka weyn ee mucaaradka ahaa ayaa qaadacay doorashada Madaxweynaha, iyagoo shuruud ku xiray, waxaa ay dalbadeen in howsha doorashada laga qeyb geliyo Ahlusuna, lana kala diro Guddiga qeybsamay ee doorashada Madaxweynaha.
Guddiga doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka ee 8-da xubnood ahaa ayaa diiwaan geliyay Musharaxiin Madaxweynaha oo uu ku jiro Musharaxa ay dowladda wadato iyo Musharaxiinta Madaxweyne kuxigeenada.